Times24 Nepal » म सँग विवाह गर्ने केटा नेपालमै छैन : शीतल दाहाल
शीतल दाहाल महिला स्वतन्त्रता र यौनका विषयमा निर्भीक कलम चलाउने युवापुस्ताकी लेखिका हुन् । उनका लेखहरूमाथि सोसल मिडिया तथा अनलाइनहरूमा चर्को बहस हुने गरेको छ ।रत्नराज्य क्याम्पसबाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेकी शीतल काठमाडौंको रामकोटमा जन्मिएकी हुन् । अहिले उनी हिरो मोटोकर्प नेपालकी मिडिया कोर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत छिन् ।शीतलसँग उनको लेखन, यौन जीवनसम्बन्धी धारणा, विवाह, नारी स्वतन्त्रता आदि विषयमा साप्ताहिकको कुराकानी
चर्चित हुनका लागि लेख्दिनँ भन्नुभयो तर तपाईं लेखेरै चर्चित हुनुभएको हो नि? हा हा हा (लामो हाँसो)
तपाईहरुले मलाई चर्चित नै मान्नुहुन्छ भने त म चर्चितै हो। लाखौंले तपाईंका लेख पढ्थे कस्तो प्रतिक्रिया आउँथ्यो? कैयौं प्रतिक्रिया त यस्ता पनि आउँथे जसलाई म पढ्नै सक्दिन थिए। एकपटक मेरो जीवन मेरो मर्ज शीर्षकमा लेख लेखेकी थिएँ, जसमा मैले बच्चा जन्मियो भने पहिलो हक आमाको हुन्छ,बाबु भनेको त आमाले चिनाइदिने व्यक्ति हो भनेर लेखेकी थिए। उक्त लेखमा यति गाली आएको थियो कि म गाली पढ्दापढ्दै सिरियस भए, यतिसम्म सिरियस कि झन्डै फेड हुने अवस्था सिर्जना भयो । कतिसम्म भने मलाई मात्र होइन मेरी आमा र बुबासमेतलाई गाली गरिएको थियो ।
मेरो साथीले तिम्रो काम लेख्ने हो, गाली पढ्ने काम तिम्रो होइन भनेर सम्झाएपछि बल्ल म नर्मल भए । उसले गालीबाट प्रभावित हुन्छौं भने तिमीले किन लेख्ने ? तिमीले आफ्नो लेखबाट अरूलाई प्रभावित तुल्याउने हो, यसरी सिरियस हुने होइन भनेर सम्झाएपछि म ठीक भए ।
त्यसपछि मैले कति धेरै लेख लेखे, तर कमेन्ट कहिल्यै पढिन। अहिले पनि म लेख लेख्छु, कमेन्ट पढ्दिन। लेख त म आफ्नो मर्जीले लेख्छु, गाली त उनीहरू आफ्नो मर्जीले गछ। म उनीहरूको मर्जीको गाली किन खाउँ ? त्यसकारण अहिले म कमेन्ट हेर्दिनँ कतिपयले तपाईंको लेखनलाई सेक्सिलो लेखन भनेर कमेन्ट गर्छन। आफैंलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? सेक्स भन्ने कुरा म मेरो हरेक लेखमा आओस् भन्ने चाहन्छु । मेरो जीवनमा त्यो कुराको एकदमै महत्व छ। यदि त्यो कुरा बुझिएन भने मलाई जीवन अधुरो हो जस्तो लाग्छ।
साप्ताहिक बाट बाकी अन्श साप्ताहिकमा